यामाहाको शेयर मार्केट २३ प्रतिशत होल्ड गरेका छौँ : उत्तम अधिकारी | चितवन पोष्ट
गृह » यामाहाको शेयर मार्केट २३ प्रतिशत होल्ड गरेका छौँ : उत्तम अधिकारी
चितवनको रत्ननगर–१६, दोबाटोबजारमा ०३४ फागुनको फागु पूर्णिमाका दिन जन्मिएका उत्तम अधिकारी चितवनका एक सफल व्यवसायी मानिन्छन् । ०५२ सालदेखि खैरहनी–८,स्थित चौबीसकोठीमा अटो व्यवसायको सुरूआत गरेका अधिकारी यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा टाँडी, पर्सा र भण्डारामा कालिका मोटरसाइकल पार्टस् सञ्चालन गर्दै आएका छन् । व्यवसायसँगै समाजसेवामा संलग्न रहँदै आएका अधिकारीसँग उनले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा केन्द्रित रहेर चितवनपोष्टले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) अटो व्यवसायमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका के कस्ता उतारचढाव आए ?
–मैले जुन समयमा व्यवसाय सुरूवात गरेँ, त्यो समयमा नारायणी अञ्चलमै जम्मा ५ हजार मोटरसाइकलमात्रै दर्ता भएको थियो । त्यस समयदेखि हामीले मोटरसाइकल वर्कशप र पार्टस् सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ । जुन समय मासिक चारदेखि पाँच वटा मोटरसाइकल सर्भिसिङ्गमा आउने गथ्र्यो । धेरै मुस्किलले त्यो समयमा मैले आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउन सकेको हुँ । सानो बजार, थोरै लगानी र सानै उमेरको कारणले धेरै कठिनाइँ आइपरेको थियो । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा चन्दाको बिगबिगी र भागदौड गर्नको निम्ति सवारी भनेकै मोटरसाइकल थियो ।
व्यवसाय गर्नेमध्ये हामी मोटरसाइकल व्यापारीलाई झनै कठिन अवस्था थियो र यसको बाबजुद पनि अटो व्यवसायलाई आज यहाँसम्म ल्याउन सक्यौँ । २०५२ साल देखि २०५६ सालसम्म मासिक ३ देखि ४ हजारसम्म मात्रै आम्दानी हुन्थ्यो भने २०५६ सालदेखि व्यवसाय अलि उकालो लाग्न थाल्यो । त्यति बेला हामी ३ जनाबाट काम हुने वर्कशपमा २ जना थपेर ५ जना भयौँ । र, २०६० सालसम्ममा आउँदा ९ देखि १० जना कर्मचारीबाट सर्भिस दिने गथ्र्यौं । ०६० फागुनदेखि हामीलाई यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा सब डिलरको अनुमति प्राप्त भयो । यसै क्रममा यामाहा मोटरसाइकल तथा पार्टस्को आधिकारिक बिक्रेता भई आजसम्म आउदा तीन ठाँउ टाँडी ,पर्सा र भण्डारामा मेरो आफ्नै शोरुम रहेको छ ।
२) पूर्वी चितवनमा यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अवस्था कस्तो छ ?
–यामाहा जापानको उत्कृष्ट टेक्नोलोजी भएको मोटरसाइकल÷स्कुटर उत्पादन कम्पनी हो । अधिराज्यभरमा नै यामाहाले आफ्नो एक अलग स्थान ओगटेको छ । यो वातावरणमैत्री भएको कारणले पनि यसलाई धेरै ठाउँहरुमा रुचाइएको छ । यसैगरी पूवी चितवनको हकमा भन्नुपर्दा स्कुटरको शेयर मार्केट हामीले ३५ देखि ४० प्रतिशत होल्ड गरेका छौँ । र, सबै कम्पनीअनुसार हेर्ने हो भने यामाहाको शेयर मार्केट २३ प्रतिशत होल्ड गरेका छौँ । यसरी हेर्दा यामाहाको मोटरसाइकल तथा स्कुटरको बिक्री उच्च नै देखिन्छ । हामीले आफ्नो ग्राहकवर्गलाई दिने विश्वसनीय सेल्स सर्भिसको कारण पनि यामाहा ब्राण्डको सेल्स सर्भिस सेन्टरको अवस्था राम्रो रहेको छ । हामीले आफ्नो व्यवसाय अटो भए पनि यसलाई विभिन्न श्रेत्रमा विभाजन गरेका छौँ । जस्तै, कृषकमा आबद्ध रहनुभएका ग्राहकको लागि विशेष प्याकेज ल्याएका छौँ । हामीले दुग्ध डेरीमा कृषि प्याकेजअन्तर्गत १०० थानमाथि मोटरसाइकल तथा स्कुटर दिइसकेका छौँ । त्यसैगरी पत्रकार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरु तथा विभिन्न संघसंस्थाका व्यक्ति साथै वित्तीय संस्थालाई हामीले छुट्टाछुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरेका छौँ । यसको कारणले नै अझ यामाहा ब्राण्डप्रति ग्राहकको रुचि देखिएको छ ।
३) सर्भिस सेन्टरबाट ग्राहकले कस्तो सन्तुष्टि पाएको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
–हाम्रो अटो व्यवसायमा होस् वा अन्य कुनै व्यवसायमा सर्भिसको पाटो एकदमै मह¤वपूर्ण स्थानमा हुन्छ । कुनै ब्राण्डको कम्पनी लिन जति सजिलो हुन्छ, त्योभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न । सानो–सानो लापरबाहीले पनि ग्राहकहरु सर्भिसबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् । त्यसैले मैले कहिल्यै पनि सर्भिसको पाटोमा सम्झौता गरिन । सुरू–सुरूमा ग्राहकलाई सर्भिसको नियममा लिएर आउन निकै कठिनाइँ भयो तर अहिले सबैकुरा राम्रो भएको छ । हाम्रो सर्भिस सेन्टरबाट हरेक दिन सर्भिसिङ्ग गरेर जानुभएका ग्राहकलाई सन्तुष्टि भयो कि भएन र सर्भिसिङ्ग गर्न आउने दिनको लागि फोन गरेर फ्लोअप हुन्छ । दैनिक फोन फ्लोअपबाट हामीले दिने सर्भिसिङ्गमा फिड ब्याक रिर्पोट लिइरहन्छौँ ।
विभिन्न संघसंस्थामा गई समय–समयमा फ्री चेकअप क्याम्प गर्नुका साथै हरेक वर्ष चारपटक फ्री सर्भिस क्याम्प लगाइरहेका हुन्छौँ । दक्ष तथा ट्रेनिङ्गप्राप्त मेकानिकहरुबाट सर्भिस हुनुका साथै कम्प्युटराईजिङ्ग प्रविधिबाट मोटरसाइकलको चेकअप हुने गरेको छ । समयअनुसार टेक्नोलोजीहरु एडभान्स हुँदै गइरहेको छ । यस्तो समयमा झनै कुनै किसिमको पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन । सर्भिसमा जति पनि ग्राहकहरु आउने गर्छन्, हामीले हरेक कुराको ध्यान राखेका हुन्छौँ । आज नारायणी अञ्चलभर यो एकमात्र वर्कशप हो, जहाँ ग्राहकहरु सर्भिसिङ्ग गराउन आउँदा एसी रुममा बस्ने गर्छन् ।
यदि मोटरसाइकलमा कुनै पनि किसिमको समस्या आएमा घरसम्मै पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छौँ, संस्थामा आवद्ध ग्राहकहरुको लागि पार्टस्मा सहुलियत दिइरहेका छौँ । हरेक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, पत्रकारलगायत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सहुलियतमा रिपेयरिङ्ग तथा सर्भिसिङ्ग उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
४) सामाजिक क्षेत्रमा यहाँको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
–मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले समाजप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै रहन्छ । समाजमा भइरहेका अनेक राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरु समेटिँदै जाने हुँदा हाम्रो पनि जिम्मेवारी रहन्छ कि राम्रो कामको सुरूवात आफूबाट नै गरौँ । समाजमा हुने विकृति विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हामीहरुको भूमिका पनि मह¤वपूर्ण रहन्छ । जसलाई हाम्रो थोरै सहयोगले पनि धेरै राहत मिल्दछ यस्तो कार्यको थालनी अहिलेको युवा व्यवसायीहरुबाट नै सुरूवात गर्नुपर्दछ । सामाजिक क्षेत्रहरुमा हाम्रो सानो कोसिसबाट नै हामीले समाजमा देखिएका विकृतिहरुलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग हातेमालो गर्दै ग¥याँै भने सुविधाबाट वञ्चित र पहँुच नपुगेका ठाउँहरुमा सहयोग पु¥याउँछाँै । हाम्रो सानो कोसिसबाट धेरैले प्रेरणा लिनेछन् ।
सुरूवात आफैँ गरौँ भन्ने धारणा राख्दै मैले गरेको व्यवसायबाट सामाजिक कार्यको लागि केही प्रतिशत रकम छुट्याउने गरेको छु । मेरो सोचमा व्यवसाय एउटा नाफामुखी मात्र नभई यसबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी, पीडित परिवारलगायत मेरोतर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गर्छु । जस्तै, बाढीपीडित, भूकम्पपीडितलगायत विभिन्न क्लब, संघसंस्थामा मेरो तर्फबाट सहकार्य गरी सक्दो सहयोग गर्दै आइरहेको छु । त्यसैगरी हामीले बिक्री गर्ने हरेक मोटरसाइकलको बिक्रीबाट रु.२०० छुट्याई कालिका यामाहा कोष खडा गरेको छु ।
त्यसै क्रममा यस कोषको माध्यमबाट १५ जना अनाथ, जेहेन्दार, विपन्न र पिछडिएका बालबालिकाहरुको कक्षा १२ सम्मको अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति दिइसकेका छौँ । साथै विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरुमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरुबाट पनि प्रेरणा मिलेको छ । मैले गर्ने सामाजिक कार्यहरु संग्लग्न भई सर्पोट पनि गरिरहनु भएको छ । तसर्थ, अरुबाट गरिने होस् वा हाम्रो कोषबाट गरिने सामाजिक कार्यहरुमा मेरो सहभागिता हुन्छ ।
५) भावी योजनाहरु के के छन् ?
–हामीले पहिला त ग्राहकहरुको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्छौँ । जे काम गर्छौं, आज ग्राहक र यामाहा ब्राण्डलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ । सेल्सलाई हामीले हरेक क्षेत्रमा लैजाने कोसिस गरिरहेको छौँ । हामीले किसानदेखि लिएर कर्मचारी, कृषि क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा र पत्रकारहरुलाई पनि विशेष सहुलियतमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराइरहेको छौँ । र, यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । सामान्य आम्दानी हुने कृषकदेखि कर्मचारीले पनि यामाहाको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य लिएका छौँ ।
दुग्ध, कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारी होस् या दूध बेच्ने सदस्यले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा शून्यदेखि २० प्रतिशतसम्मको डाउनपेमेन्टमा विषेश सहुलियतका साथै फाइनान्सको सुविधामा उपलब्ध गराउने छौँ । हामीकहाँ फाइनान्सदेखि शोरुम एउटै भवनमा भएकोले फाइनान्सको लागि वित्तीय संस्थाहरु खोज्दै हिँड्नु पर्दैन । स्पोट फाइनान्सका साथै डोर टु डोर फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ, जसले ग्राहकहरुको समयको बचत हुनेछ र डोर टु डोर फाइनान्स सुविधाको सुरूवात हामीले गरिसकेका पनि छौँ ।
शिक्षक कर्मचारी, वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा सदस्य र पत्रकारहरुलाई लाग्ने पार्टस्मा केही प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनेछौँ । हामीले सामाजिक कार्यहरुलाई बढी प्रोत्साहन गर्नेछौँ । हामीले खडा गरेको ‘कालिका यामाहा कोष’द्वारा पूर्वी चितवनमात्र नभई चितवनमा रहेका विभिन्न विकट स्थानहरुमा रहेका स्थानीय विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका तथा शिक्षाबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहँुच बनाउने साथै यस्ता क्षेत्रहरुमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने छौँ ।
शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले विकट ठाउँहरुमा रक्तदान तथा स्वाथ्य शिविर पनि गर्नेछौँ । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुमा पनि आबद्ध रही हातेमालो गर्दै जानेछौँ । हामीले बिक्री गरेको हरेक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको बिक्रीबाट छुट्याइएको रु. दुई सय हरेक ग्राहकको नामबाट कालिका यामाहा कोषमा जम्मा गरिने तथा सहयोग आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा सहयोग गर्दै जाने पनि योजना रहेको छ ।
६) व्यवसाय र देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
–साह्रै मह¤वपूर्ण कुरा हो यो । सानाभन्दा साना व्यवसायीहरुको व्यापारसँग पनि जोडिने हुन्छ देशको अर्थतन्त्र । किनभने, हरेक व्यवसायले आफ्नो वार्षिक आम्दानीबाट भएको नाफाको कर तिरिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीहरु कर तिर्न लालायित पनि छन् । पहिलेको जस्तो समय छैन । सुरक्षित वातावरण भए पनि राजस्व तिर्न कठिन भइरहेको हुन्छ । आज विश्व बजारलाई हेर्दा आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाटमात्रै सम्भव भएको छ । तर, व्यावसायिक क्षेत्रहरु अझ पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन । हुन त अहिले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन पास भइसकेको र केही नियमावलीहरु बन्ने क्रममा छन् । देशमा भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भई राजनीतिक स्थायित्व पाइरहेको अवस्था देखिएको छ ।
त्यसकारणले गर्दा पनि अब व्यवसाय गदै गरेकाका लागि र आउने व्यवसायलाई पनि राम्रो देखिएको छ । जसकारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा राज्यको ढुकुटी बलियो हुनु हो । हाम्रो स्थानीय व्यावसायिक संघसंस्थाहरुमा अझ राजनीति हावी हुँदै गएको छ । जसकारण साना र मध्यम वर्गीय व्यवसायहरु अझ विस्थापित हुने हो कि भनी व्यावसायिक संगठनहरुले व्यवसायहरुको व्यथा बुझ्न सकेको देखिँदैन । कति धेरै एजेण्डाहरु छन् । उदाहरणको लागि घरभाडा, बजारभाउ र बजार अस्तव्यस्त कर सम्बन्धित जानकारी र व्यवसायीहरुको वर्गीकरण छुट्टाई करलगायत आन्तरिक लेखाजोखासम्बन्धमा हाम्रो संगठनहरु व्यवसायीहरुसँग क्रियाशील दैखिँदैन ।
युवा व्यवसायी राजु श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष...